चितवनमा तामाङ चलचित्र आप्लेङला नाम्साको बिशेष प्रदर्शन, अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट - Tamang Online
चितवनमा तामाङ चलचित्र आप्लेङला नाम्साको बिशेष प्रदर्शन, अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट
तामाङअनलाइन , खैरहनी । मौलिक तामाङ चलचित्र आप्लेङला नाम्सा (मितबाऊको गांऊ) को बिशेष प्रदर्शन गरिएको छ । तामाङ पत्रकार संघ चितवनले खैरहनीको पर्सामा चलचित्रको बिशेष प्रदर्शन गरेको हो ।
ग्रामिण कथा र कला संस्कृति झल्काइएको फिल्मलाई उपस्थित दर्शकले खुलेर प्रशंसा गरे । फिल्मले नयां पुस्ताले भुल्न लागिसकेको तामाङ रितिरिवाज र कला संस्कृतिलाई जिवन्त बनाउने काम गरेको राप्ती नगरपालिकाका उपप्रमुख इमानसिहं लामाले प्रतिक्रिया दिए । त्यस्तै फिल्मले तामाङ समुदायको यथार्थ जीवन बोकेको बताउदै नेपाल तामाङ घेदुङका संघीय सदस्य गोमनसिहं रुम्बाले फिल्मले तामाङ समुदायको सांस्कृतिक जागरणका निम्ति महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको उल्लेख गरे । फिल्मको कथा र प्रस्तुति अब्बल रहेको बताउदै गायक हरि योन्जनले यस्ता सन्देशमुलक फिल्महरु अझै बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उपस्थित दर्शकले फिल्मलाई हालसम्म निर्मित तामाङ फिल्महरुमध्यकै अब्बल रहेको बताए ।
तामाङ घेदुङ भरतपुरका अध्यक्ष नरजंग तामाङ, राप्तीका अध्यक्ष सन्देश थिङ, जनप्रतिनिधिहरु सरस्वति लामा, दिलकुमारी थिङ लगायत तामाङ अगुवाहरुले फिल्म हेरेका थिए ।
सयौं दर्शकको सकरात्मक प्रतिक्रियाले उत्साहित भएको र अझै सन्देशमुलक फिल्म निर्माणमा क्रियाशिल रहने फिल्मका निर्माता छेम्बल ह्योल्मोको भनाई छ । फिल्मको बिशेष प्रदर्शनमा निर्माता ह्याल्मोसहित निर्देशक अजय स्याङतान र नायक बद्रि थिङ सहभागि थिए ।
तामाङ पत्रकार संघले नियमित गर्दै आएको विविध कार्यक्रहरुका बीच फिल्ममार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने उद्धेश्यले फिल्म देखाइएको तामाङ पत्रकार संघ चितवनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र तामाङले बताए । यसबाट तामाङ चलचित्रका बजार बिस्तार हुने र नयां पुस्तामा परम्परागत रितिरिवाज र भेषभुषाबारे ज्ञान बढ्ने उनको भनाई छ । चितवनका अन्य स्थानमा पनि फिल्मको बिशेष प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्यक्रम संयोजक तथा संघका सचिव राजेश रुम्बाले जानकारी दिए ।
२८ असोज २०७५
« दशैं राजनीति कि संस्कृति ? – मोहन गोले तामाङ (Previous News)
(Next News) बिहेअघि सेक्स नगरौं – साइकलचालक अशोक यादव »
बहुप्रतिभाका धनि ‘ बिजय तामाङ धड्कन “
युट्युवबाट आफैंले हटाएको पशुपति शर्माको गीतमा के छ त्यस्तो ? (पूर्णपाठसहित)
जीवन शर्मा भन्छन्– शब्द चयनमा पशुपति शर्माजीको ध्यान पुगेन कि ?
सत्तापक्षीय आक्रोशपछि पशुपति शर्माले युट्युबबाट हटाए ‘लुट्न सके लुट’